Andiany fahatelo ny fanentanana : ankizivavy 14 amin’ny 100 iharan’ny herisetra | NewsMada
Andiany fahatelo ny fanentanana : ankizivavy 14 amin’ny 100 iharan’ny herisetra
Par Taratra sur 24/06/2016
14%-n’ny ankizivavy 15-19 taona iharan’ny herisetra ara-pananahana avokoa eto amintsika, 15% kosa ianjadian’ny herisetra ara-batana. Ho an’ny vehivavy, 47% ireo mieritreritra fa misy antony ny herisetra ampiharin’ny lehilahy amin’ny vadiny. Tarehimarika manambara fa misy ny herisetra mianjady amin’ny ankizy eto amintsika. Natomboka omaly teny Antsahamanitra ny fanentanana fahatelo iadiana amin’ny herisetra atao amin’ny ankizy iarahana amin’ny minisiteran’ny Mponina sy ny vadin’ny filoha Rajaonarimampianina Voahangy ary ny mpiray ombon’antoka toy ny Unicef. Misy fiantraikany amin’ny fianarana sy ny hoavin’ny zaza tsirairay ny herisetra ka mila arovana izy ireny.
Endrika iray isehoan’ny herisetra koa ny fampiasana azy mialoha ny 18 taona. Miasa avokoa ny ampahefatry ny zaza malagasy ary asa mitera-doza ho an’ny fahasalamany ny ankamaroany, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny fiarovana ny ankizy ao amin’ny Unicef, Yann Grandin.
Tany Mahajanga, misy koa ny fanamarihana ny ady amin’ny herisetra atao amin’ny ankizy.
40 ny ankizy mbola tsy manana ny kopia nahaterahana eto an-tampo-tanànan’i Mahajanga. Vonona hifanampy amin’ny fanomezan-tànana ny foibem-paritry ny mponina amin’ny fikarakarana ireo ankizy ireo ny faritra, hoy ny lehiben’ny kabinetran’ny faritra Boeny, Hemedy. Omby iray no novonoina natao sakafo niarahan’ireo kilonga madinika arivo avy amin’ireo fokontany 26 mandrafitra ny kaominin’i Mahajanga.